मंगलटारबाट लागू औषध सहित एक पक्राउ – Radio Roshi
मंगलटारबाट लागू औषध सहित एक पक्राउ
इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटारको प्रहरीले चेकजाँजको क्रममा लागू औषध सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । बुधबार अपरान्ह बीपी राजमार्ग हुँदै झापाबाट काठमाडौं तर्फ जाँदै गरेको बा.४.ख २२६७ नं. को हायस गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रु सप्तरी जिल्ला सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने २२ बर्षीय धर्मेन्द्र कुमार रामले बोकेको झोलाबाट लागू औषध फेला परेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी कुमारबिक्रम थापाले उनका साथबाट डायजेपाम–२५० एम्पुल, बुफ्रिनोर्फिन–२४० एम्पुल र फन्नेर्गन–२५५ एम्पुल सहित ७४५ एम्पुल बरामद गरेको जानकारी दिए । लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ बमोजिम अनुसन्धान गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट म्याद थप अनुमती लिई अनुसन्धान कार्य भई रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।